Maraykanka Iyo Midowga Afrika oo Sheegay in uu soo dhawaaday Waqtigii ay Soomaaliya ammaankeeda la wareegi lahayd | SAHAN ONLINE
Maraykanka Iyo Midowga Afrika oo Sheegay in uu soo dhawaaday Waqtigii ay Soomaaliya ammaankeeda la wareegi lahayd
MUQDISHO – Maraykanka iyo midowga Afrika ayaa isku raacay in uu soo dhawaaday waqtigii Soomaaliya ay la wareegi lahayd mas’uuliyadeeda dhinaca ammaanka.
Marekanka iyo Midowga Afrika oo Soomaaliya ka taageerra nabadgalyadda ayaa sheegay hadda inuu soo dhawaaday waqtigii dowladda Soomaaliya ay la wareegi lahayd amniga dalka.
Dhinaca kale,Ambassador Francisco Madeira,oo ah madaxa qeybta rayidka ee howlgalka AMISOM, ayaa sheegay in ay bilaabayaan in ciidamadooda ay kala baxaan Soomaaliya marka la gaaro sanadka 2018.
Dowladda Soomaaliya iyo dalalka ay saaxibadda yihiin ayaa hadda ka shaqeynaya sidi ay u tababari lahaayeen ciidamo gaaraya 28,000 oo askari oo loo diyaarinayo inay la wareegaan amniga dalka.
Ugu dambeyntii,dowlada Federaalka Soomaaliya ayaa ku tiirsan ciidamo ka socda Midowga Africa oo gaaraya 22 kun oo askari. Ciidankaas ayaa ilaaliya madaxda dowladda iyo ilaha ugu muhiimsan dhaqaalaha dalka sida qaar ka mid ah dekdaha iyo garoomada diyaaradaha.